Lọ ọrụ na-emepụta Generator, ndị na-ebunye ya - China Generator Manufacturers
Iji elu impedance muffler mmekọahụ, na-ebelata iyuzucha muffler ọnụ olu.
Hookon adaba, unit maka adaba njem, na Herọd Herọd set 4 eweli equipments.
Ọdịdị mara mma, usoro dị mma.
All usoro nke soundproof generator set nwere ike si na anya na-eweli nko n'elu
Ọrụ ịrụ ọrụ ka mma, agba agba siri ike kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ ihu igwe niile ma zere nchara ruo ogologo oge
More kọmpat na ike Ọdịdị, muffle wuru-na ala mkpọtụ larịị Ọdịnala ala ikuku oriri imewe; zere ájá na adịghị ọcha ndị ọzọ.
Bawanye ebe nke ikuku ikuku na ihapu
Traction: iji mobile nko, 360 Celsius turntable, mgbanwe n'iru, hụ na nchekwa na-agba ọsọ.
Braking: brek: n'otu oge na a pụrụ ịdabere na ShouYaoShi breeki usoro na breeki interface, hụ na nchekwa nke ịkwọ ụgbọala.
Ndabere: iji hụ na nkwụsi ike nke ọrụ ụgbọ ala ike, yana naanị ngwaọrụ anọ ma ọ bụ nkwado hydraulic.
Ọnụ ụzọ & windo: ihu nwere oghere azụ nwere windo, ọnụ ụzọ, ọnụ ụzọ abụọ maka ndị ọrụ.